Shafi Aden oo u sharaxan bilada hal abuuraha ganacsi ee sanadka 2017(Årets Entreprenør) - NorSom News
Shafi Aden oo u sharaxan bilada hal abuuraha ganacsi ee sanadka 2017(Årets Entreprenør)
Shafi Aden oo ah ganacsade da´yar oo soomaali ah ayaa sanadkan kamid ah dadka u sharaxan bilada hal abuuraha ganacsi ee sanadka 2017. Shafi ayaa wax ka aas-aasay, saamina ku leh shirkada Zoop It oo ah shirkad ka shaqeysa iskuxirka dukaamada iyo macaashiisa qaabka online-ka wax ku dalbado.
-Halkan ka akhri qoraalka shirkada Shafi oo heshay 12 milyan oo maalgalin ah
Bilada hal abuuraha ganacsi(Årets Entreprenør) ayaa ah bilad la siiyo qof ama dukaan keenay hal-abuurnimo ganacsi iyaga oo isticmaalayo qarash yar, keenayna hab ganacsi ama teknoliyad cusub.
Shafi waxaa sanadkan la sharaxan Arne Kvale oo wax kala aas-aasay Zoop It iyo sadex qof oo kale oo dhamaantood norwiiji ah. Go´aanka qofka ku guuleystan biladan ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa shirweynaha mustaqbalka ganacsiga, kaas oo dhici doono 27-ka bishan April.
Maalinta dhaqaalaha ganacsiga iyo Shafi:
Maanta waxaa magaalada Oslo lagu qabtay shirka maalinta dhaqaalaha ganacsiga, kaas oo ay kasoo qeybgaleen dad ay kamid yihiin Erna Solberg(Reysulwasaaraha Norway), Jonas Gahr Større(Gudoomiyaha Ap), Siv Jensen(Wasiirada ganacsiga), Rune Bjerke(Agaasimaha guud ee bankiga DNB) iyo dad kale oo badan oo kamid ah dadka ka shaqeeyo dhaqaalaha ama gacanta ku hayo maamulkiisa(Finanseliten).
Dadka kulankaas maanta lagu marti qaaday ee hadalka ka jeedinayay waxaa kamid ah Shafi Aden(Halkan Ka daawo muuqaalka).
Xigasho/kilde: The futurebusiness.no,
Previous article(M.H)-Halima Aden: Jeg trodde det ikke var plass til meg i moteverdenen
Next articleNTB: Minst sju drept av bilbombe ved tehus i Mogadishu